Tổng hợp những lời chúc mừng thọ hay và ý nghĩa nhất năm 2022 | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: Tổng hợp những lời chúc mừng thọ hay và ý nghĩa nhất năm 2022 | Muasalebang in Muasalebang
Lezi imikhonzo yempilo ende Ingenye yezindlela zokubonisa uthando nenhlonipho izingane ezinayo ngabazali bazo nakogogo nomkhulu. Isihloko esilandelayo sizophakamisa izifiso ezinhle kakhulu, eziqukethe izincazelo ezinhle zokunikeza obathandayo ngesikhathi sonyaka omusha.
1 Isifinyezo sokubingelela okuzwakalayo kosuku lokuzalwa
1.1 Happy birthday kubazali
1.2 Siyakuhalalisela ngempilo yakho ende
1.3 Isifinyezo sezinkondlo zokuzalwa ezimfushane nezizwakalayo
1.4 Inhlanhla couplets
Isifinyezo sokubingelela okuzwakalayo kosuku lokuzalwa
Impilo ejabulisayo (eyaziwa nangokuthi umkhosi wempilo ende) ingenye yezici zendabuko zamasiko abantu baseVietnam kusukela kudala kuze kube manje ukukhombisa inhlonipho, ukubonga “amanzi okuphuza, khumbula umthombo”, ukuhlonipha izingane. kwezingane nabazukulu nogogo nomkhulu nabazali .
Amaphathi osuku lokuzalwa enziwa izingane nabazukulu lapho ogogo nomkhulu nabazali sebengaphezu kweminyaka engama-70 futhi ngokuvamile ngisho neminyaka. Emcimbini wokulangazelela ukuphila isikhathi eside, ukubingelela kwempilo ende kuyizipho ezibaluleke kakhulu ezivela ezinganeni nakubazukulu kuya kogogo nomkhulu nabazali.
Happy birthday kubazali
Kuphela ngokukhulisa izingane lapho bengakwazi ukuqonda ukubonga kwabazali babo, lapho izingane zabo zikhula, abazali babo banezinwele ezimpunga. Ingabe kukhona impahla efanele ukubuyisela ukubonga kwezulu nolwandle lwabazali, singanikela kuphela yonke imizamo yethu yokuvuka, ikusasa lemfundo yezingane zethu esikhundleni sokubonga okuqotho kubazali bethu. Fisela ukuthi uhlale unempilo enhle neminyaka eyikhulu yokuphila isikhathi eside ukuze uhlale usekela ngokomoya kithi sonke.
Ukubonga kwabazali ngokukhuliswa nokuzalwa akuqhathaniswe.Namuhla, ngosuku lokuzalwa, ngikufisela uphile phakade, ujabule phakade.
Ngesikhathi sokugubha usuku lokuzalwa, ngifisela abazali bami impilo eyengeziwe ukuze bajabulele injabulo kanye nathi, ukuze sibe namathuba amaningi okubonga ngokuzalwa nokukhuliswa kwakho.
Namuhla, usuku olukhethekile, ngifisela abazali bami unyaka omusha, impilo enhle, injabulo ehlala njalo, ejabule njalo ukuba nathi kuze kube phakade.
Namuhla, usuku abazali bami abathola ngalo inkathi entsha, nami sengivuthiwe, angifuni lutho ngaphandle kwempilo, injabulo nokubona ukumamatheka ezindebeni zabazali bami nsuku zonke, ngiyakuthanda.
NgoSuku Lomama, nginifisela unyaka omusha omuhle nempilo enhle. Ngethemba ukuthi uphila impilo ende nejabulisayo nathi.
Sikufisela usuku oluhle lwabazali, akukho okunye ngaphandle kokunifisela impilo enhle. Ngethemba ukuthi ngingahlala nawe isikhathi eside ukuze ngibuyisele umusa wabazali bakho.
Ngemizwa eqotho esuka ekujuleni kwenhliziyo yami, ngithanda ukudlulisa ukubonga okujulile nobuqotho kubazali bami, abaye baba nosizo lokubeletha nokusebenza kanzima ukuze basikhulise futhi basifundise ukuba ngabantu.
Ngikufisela wena nabazali bakho impilo enhle, ukuthula kwengqondo nempilo ende ongayijabulela nathi.
Ngifisela abazali bami “Bajabule njengo-Dong Hai, Tho njengoNam Son” impilo enhle, ukuze sibe nesikhathi esengeziwe sokukhokha ukuhlonipha kwabazali bethu.
Siyakuhalalisela ngempilo yakho ende
Unyaka omusha uyafika futhi, ogogo nomkhulu sebenonyaka owodwa ubudala, banethemba lokuthi bayohlala bephilile ukuthanda izingane zabo nabazukulu iminyaka eyikhulu.
Emcimbini okhethekile wokugubha iminyaka yogogo nomkhulu, ngithanda ukubafisela impilo ende nempilo enhle. Ngiphinde ngibonge ngobuqotho ugogo nomkhulu ngokuzalwa kwabo kubazali bami. Kwangathi ogogo nomkhulu bangaphila isikhathi eside, ukuphila okunempilo ukuze bajabulele injabulo nezingane zabo nabazukulu.
Unyaka omusha uyeza, ngikufisela injabulo enkulu, injabulo nempilo enhle. Nakuba sihlala singekho nogogo nomkhulu, sihlala sikhumbula izinzuzo zokukhulisa ogogo kubantwana nabazukulu babo.
Unyaka udlule ngokushesha, ogogo nomkhulu sebenonyaka owodwa, anginakho okuningi, nginethemba lokuthi ogogo nomkhulu baphile kahle ukuze bajabulele injabulo nezingane zabo nabazukulu. Kwangathi umndeni wethu ungahlala ujabule, ujabule futhi uthandane.
Ngikufisela – Impilo ende nempilo – Phakade bancane futhi hhayi abadala – Uthando nokuzwana – Ikhaya eliphumelelayo – Injabulo nokuthula.
Namuhla ugubha iminyaka engu-80, angazi ukuthi ngithini ngaphandle kokukufisela impilo ende nenempilo. Ngiyabonga ngokusipha namuhla futhi ngiyethemba uzohlala unempilo kanje kuze kube phakade.
Sihalalisela iminyaka engu-80 ubudala
Ogogo nomkhulu bayizimpande zethu, izimpande zethu, mhlazana sikhula, siyakhula. Ngifisa nje ukuthi isikhathi sime kulo mzuzu, umzuzu wokumamatheka okukhanyayo, wokuhlangana kabusha, wemfudumalo yomndeni wethu ndawonye.
Ngikufisela iminyaka eyengeziwe ukuze ube nesibhakabhaka esinempilo. Siyathembisa ukuthi sizolalela ogogo nomkhulu bethu ukuze bajabule futhi baphile isikhathi eside.
Njalo ngonyaka uTet uyafika, inhliziyo yami iyavutha futhi. Nakuba usunonyaka owodwa ubudala, ngisakholelwa ukuthi uzophila impilo ende. Ngikufisela ujabule futhi unempilo nsuku zonke, ngiyakuthanda!
Ngosuku olukhethekile olunjengalolu, angazi ukuthi ngithini ngaphandle kokukufisela impilo enhle. Ngithemba nje ukuthi ngizokwazi ukuba nogogo nomkhulu, ngibheke ukumamatheka kwabo futhi ngilalele izimfundiso zabo kuze kube phakade, ngibafisela ukuguga futhi ngithemba ukuthi bayohlala bejabule futhi bejabule nathi!
Ngalolu suku olubalulekile logogo nomkhulu, ngithanda ukubafisela impilo enhle, injabulo nempilo ejabulisayo, ende, enethezekile eduze kwezingane zabo nabazukulu.
Unyaka omusha ufikile futhi ogogo nomkhulu bakhulile unyaka omusha. Ngikufisela impilo enhle ukuthanda izingane zakho nabazukulu!
Isifinyezo sezinkondlo zokuzalwa ezimfushane nezizwakalayo
Ngihalalisela abazali bami ngeminyaka eyikhulu
Unempilo, ujabule, awukwazi ukubamba
Ukukhathazeka nezinkinga azisabambeki
Jabulela ipharadesi khona kanye enhliziyweni.
Incazelo kamama ifana namanzi aphuma emthonjeni
One Heart Worship Umama Glass Baba
Ngokuba inkolo entsha yengane iyinkolo yengane.
Inhlabathi encibilikisiwe esithandweni esibilayo
Intwasahlobo engamashumi ayisikhombisa ihlanganisa izinguquko eziningana
Uthando ekhaya lwatshala ngokuqinile izihlahla zaseJalimane
Iqiniso lokuthi izwe likhokha ngenhliziyo yonke impilo
Bengifuna ukujoyina i-mainstream
Ukukhathazeka ngokuphila nokufa, indawo igcwele
Igceke linephunga elimnandi lesinamoni kanye nama-chrysanthemums
Lola ipeni ukuze ubhale izinkondlo futhi umamatheke.
Umthetho Wendlela muhle kakhulu ukuzalanisa
Izinkondlo ezinegama elikhanyayo okwesikhashana
Ukudedela umusho wokunikeza igama ubuhle
Lola ipeni ukuze ubonge ukuphila
Umuzwa wesintu uhlale ukhathaza
Vumela ubuthongo obungapheli bukhumbule
Umkhaya wangempela ugcwele injabulo
Uthando lwasentwasahlobo, kodwa emamatheka.
UNkulunkulu wengeza inkathi entsha, abantu baphile isikhathi eside
Intwasahlobo igcwele umhlaba wonke, injabulo igcwele indlu.
Inkondlo yempilo ende 70
Ukuguga akuvamile kakhulu
Ezothando uthanda ukuphila ngokukhalipha
Njalo ekuseni eduze nezinkanyezi lahleka
Yini engalungile njalo ebusuku eduze?
Ugogo nomkhulu abajabule banikeza izibuko
Izingane nabazukulu bayawujabulela umthunzi
Amasiko asekhaya agcinwa kuze kube phakade
Ukulandela inzalo kunzima ukungahambi kahle.
Uqalo lwasentwasahlobo olunokuthula nolujabulisayo
Intwasahlobo iyimpilo emsulwa futhi ende esikoleni sonke.
(Ukuthula nokuthula, uthando lwasentwasahlobo
Intwasahlobo imnandi futhi iyimpilo ende)
Impilo ende kanye nezingxenye ezisele zemillennium spades
Imikhiqizo ezichazayo kakhulu kubha.
(Ukuphila isikhathi eside kufana ne-conifer eneminyaka eyinkulungwane ubudala.)
IJalimane ifana ne-orchid impilo yonke)
I-Orchid icebile kakhulu
Intwasahlobo ehlanzekile ithokozela imimoya ephezulu.
(I-orchid yesinamoni enephunga elimnandi igubha impilo ephumelelayo.)
Intwasahlobo eluhlaza neluhlaza ijabulela impilo ende)
Izimbali zasentwasahlobo nezimbali zivuleka njengoba bekulindelekile
Ha ha ukuchuma nenjabulo yesikhathi esizayo
Ukuthula kwekwindla, ukuchuma nenjabulo
Engxenyeni yesine yempilo, i-Khuong.
Ngiyabonga kakhulu ngezintaba namagquma
Incazelo kamama ingaphezu kwezinkulungwane zemifula
Nakuba ngathatha isinyathelo esingalungile
Ngisavule izingalo – buthule eduze kwakho.
Ukuthula, ukuchuma, ingcebo, ukuthula
Iminyaka eyikhulu yokuphila isikhathi eside.
Ngifisa Wena, Ngifisa Wena
Phuc Nhu Dong Hai
Tho Ty Nam Son
Ukuguga kuyivelakancane futhi kuseyishumi nanhlanu
Intwasahlobo igcwele umhlaba wonke, injabulo igcwele indlu
Intwasahlobo ijabule futhi inekhono njengoba ufuna
Unyaka ongenamingcele wokuchuma nenjabulo
“Izimbali zasentwasahlobo nezimbali zivuleka njengoba bekulindelekile
Ekwindla edlule ukuthula, ukuchuma nenjabulo
Ngekota yesine yobusika, impilo inokuthula.”
Izinkondlo zokugubha usuku lwakhe lokuzalwa lwama-90
“Ukuthula, ukuchuma, nokuthula”
Ukuphila Okude Kwabadala Abayikhulu”
Inkondlo yokugubha iminyaka eyi-100 yasungulwa
Isikhathi sihamba kuthulekile
Izinsuku eziyizinkulungwane ezintathu eziyizinkulungwane eziyisithupha eziyinqaba
Abazukulu bakho bajabule namuhla
Ijabule indoda eneminyaka eyikhulu.
Iminyaka eyikhulu phakathi kwamakhulu amabili eminyaka
Umgwaqo omude ulula kunoma ubani
Iminyaka eyikhulu phambi kwesiphepho
Iminyaka eyikhulu yezinguquko zomlando
Iminyaka eyikhulu, izinto zishintsha izinkanyezi
Iminyaka eyikhulu emi phakathi kwezulu nomhlaba
aphenduke abe yisihlahla esikhulu
Umuthi mude, amaqabunga asabalele
Vikela abazukulu bakho, unike ubumnandi empilweni
I-quintessence yezulu nomhlaba
Uthando olujulile amazwi abazali
Ukufisela ukuguga okujabulisayo nokunempilo
Njalo entwasahlobo kuza izimbali ukuzohalalisela.
Amasonto ayisishiyagalombili wokunikela ngesihlahla samapentshisi
Amagugu amane amakhulu okuzindla ngethusi.
(Iminyaka engamashumi ayisishiyagalombili isakhanya iparele lesikhathi eside
Izizukulwane ezine zigajwe yinkazimulo)
Inani lamasonto ayisishiyagalombili ubudala
Ifa lidlulisela injabulo engenamkhawulo.
(Iminyaka engamashumi ayisishiyagalombili, usemncane
Iminyaka eyinkulungwane yomndeni, izibusiso ezingenamkhawulo)
Ubude bonyaka wamashumi amahlanu buhle kakhulu
Zithokozise ngeshumi leminyaka lenhlanhla.
(Sengiphile amasonto amahlanu futhi wengeza izikhali zezimbali
Ilinde elinye ishumi leminyaka, ngizomfisela u-hi)
Umusho wesi-5 ugubha ama-90
Amaviki ayisishiyagalolunye ama-cranes anikezela ngamaphethini asagolide
Yilwa ngempela nebhodi lezokwelapha likaLai elidala.
(Izinwele ezingamashumi ayisishiyagalolunye zesiliva nemodeli yegolide
Amajazi aphinki angamashumi ayisikhombisa e-Lai endala)
Unyaka wembali esemngceleni wesiqhingi
Inhloko yomndeni yasakaza ukukhanya kweparele.
(Iminyaka yesivikelo sezimbali esinephunga elimnandi
Igceke likhula i-chi futhi lisakazeka endlini)
Isintu siyayinqoba inhliziyo yanoma yisiphi isikhathi
Isiqongo sesiqongo sentwasahlobo yaphakade
(Uhamba ibanga elide ngenhliziyo encane.
U-Chi ubheka ukuphakama kwesigcawu sentsha)
Izimbali nezimbali zikaLinh Thuong Mai
Indlu yemali yasentwasahlobo ukuvikela uPhuong Linh.
(Izimbali zamabhilikosi esiqongweni sentaba ziletha izindaba ezinhle
Izihlahla zasentwasahlobo phambi kwegceke zandisa ubudala)
UKim cinnamon uzala izinzuzo zokuguga
Umgwaqo wokuphila isikhathi eside kanye nesikhumbuzo sonyaka.
(Isinamoni yegolide iyaguga futhi ibe namandla
Inganekwane yempilo ende, fisela abantu abangajwayelekile)
I-Fairy crane millennium longevity
Ukuthanda umthombo wasendulo.
(Okhrayini bempilo yeminyaka eyinkulungwane)
Inkulungwane yeminyaka kaphayini oluhlaza ihlale intwasahlobo)
Intwasahlobo impilo ende ngokweqiniso.
Ngenhla iqoqo lezifiso, izinkondlo, imibhangqwana ongayinika obathandayo. Ufisa ukuthi ungakhetha imikhonzo yokuzalwa efaneleke kakhulu futhi enenjongo!
Xem Thêm Nerf là gì? Tất tần tật những ý nghĩa của nerf trong LMHT | Muasalebang